dimanche, 13 octobre 2019 20:08
Olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo: Matsaka eny an-drenirano hatramin’ny « Zone Franche »
Mizaka ny olana amin’ny famatsian-drano ihany koa ireo orinasa afakaba (Zone Franche) eto an-drenivohitra, indrindra ireo miasa amin’ny sehatry ny « textile », mamokatra akanjo. Fotoana mahabetsaka ny kaomandy izao, ary nampiditra mpiasa ny ankamaroan’ireo « Zone Franche » hanenjehana izany ara-potoana.
Voatery matsaka eny anan-drenirano ny « Zone Franche » sasany amin’ny fanatanterahana ny asa, ao koa ireo orinasa mamokatra jiro ho azy manokana noho ny halafosan’ny herinaratry ny Jirama, nefa matetika tapaka. Vao mitsidika anefa ity ny vanimpotoana maintany.
dimanche, 13 octobre 2019 18:35
Toamasina: Niisa 23 ireo tsena may tao Bazary Be
Ny ampitson’ny haintrano goavana nitranga tao Bazary Be dia nirohotra nifanampy ny samy mpivarotra nanadio ny tsena, mba hahafan’izy ireo mandray ny mpanjifa sahady rahampitso alatsinainy 14 oktobra 2019.
Niisa 23 ireo toeram-pivarotana may kila hotohoto tamin’ity haintrano nitranga ny harivan’ny sabotsy 12 oktobra 2019 ity. Nanolotra fanitso 120 isa sy hazo niisa 276 ny BNGRC hanampiana ireo mpivarotra hananganan’izy ireo ny tsenany.
Akoson'aratra (court-circuit) tao amin’ny mpivarotra enta-madinika izay vao nahatonga menaka amin’ny jerikana maromaro, no tombanana fa nitarika ny firehetana ka niitatra tamin’ireo toeram-pivarotana nanodidina azy. An-jatony tapitrisa Ariary ny tomban’ny entana levon’ny afo.
dimanche, 13 octobre 2019 17:57
Ankaboka - Sakaraha: Avotra ireo mpianaka takalon'aina, dahalo roa azo sambo-belona
Roalahy, mpianaka, nitondra sarety haka kitay tao analan'Ankaboka no notafihin'ny dahalo efatra nitondra basy telo ny marainan’ity alahady 13 oktobra 2019 ity. Nalain'ireo dahalo ny ombin-tsarety roa ary nataony takalon'aina izy mianaka.
Roso avy hatrany sady nanaradia no niantso vonjy tamin'ny Zandary ny Fokonolona vantany vao naheno izany. Sendra ny Zandary notarihin'ny komandin'ny tobi-paritry ny Zandarimaria Sakaraha nanao fisafoana teny Andranomaintso Sakaraha amin'ny RN7 izy ireo.
Horaiketin’ny tantara ny zava-bitan’ilay atleta teratany kenyana Eliud Kipchoge. Izy no olombelona voalohany nahavita ny hazakazaka lavitrezaka 42,195 km latsaky ny adin’ny roa ora.
1 ora 59 min 40 s no nahavitany io halaviran-dalana io, omaly sabotsy 12 oktobra 2019, tany Vienne renivohitr’i Autriche.
34 taona izao i Eliud Kipchoge. Izy no tompondaka olimpika farany, ary tompon’ny zava-bita tsara indrindra manerantany amin’io taranja atletisma hazakazaka lavitrezaka io, vitany tao anatin’ny 2 ora 1 min 39 tany Berlin Alemaina.
dimanche, 13 octobre 2019 17:04
« Festival Jerijery »: Hotontosaina ny 31 okotobra ka hatramin’ny 3 novambra ny Andiany faha-17
Miomana handray ny « Festival Jerijery » ny tanànan’i Vavatenina. Andiany faha-17 ny amin’ity taona 2019 ity, izay hotontosaina ny 31 okotobra ka hatramin’ny 3 novambra 2019.
Hisy fifaninana vakodrazana sy dihy, « Miss Jerijery », fifaninanana ara-panatanjahantena toy ny baolina kitra, baskety, tsipy kanetibe ary koa adin’akoho.
Nahafantaran’ny olona bebe kokoa an’i Vavatenina ny « Festival Jerijery », nivoatra nanaraka an’izay koa ny fanorenana fotodrafitrasa fandraisam-bahiny.
Mpanakanto maro no hanafana ny fotoana, toa an-dry Vaiavy Chila, Mario, Ramilison Besigara, Zaza Kanto …
Hotanterahina eto Toamasina ny 14 ka hatramin’ny 20 oktobra 2019 ny fifaninanana nasionalin'ny fanatanjahantena an-tsekoly "Sport scolaire national" ho an'ity taona ity. 2 000 mahery ireo mpandray anjara, izay avy amin’ny sekoly miisa 130 manerana ny Faritra 22 amin’izany. Miisa 85 ny solotenan'ny Faritra Matsiatra Ambony ka mpifaninana ny 64 amin'ireo.
Nanolotra ny Fanevan'i Mahatsiatra Ambony ny mpitarika ity Delegasiona ity ny Governora ary nitso-drano am-bavaka azy ireo hitondra ny amboara.
dimanche, 13 octobre 2019 16:18
Rovan'i Manjakamiadana: Efa eto an-drenivohitra ny ampahany amin’ireo hazo voamboana ho an’ny fanamboarana
Voamboana 350 m3 no voafaritra fa hanamboarana ny Rovan'i Manjakamiadana. Efa voatatitra eto Antananarivo ny ampahany amin' ireo voamboana saika haondrana an-tsokosoka ka nogiazana tany amin'ny faritra. Avy Mahajanga sy Toliara ireto hazo hanamboarana ny Rovan'i Manjakamiadana ireto.
Tsy lany anamboarana ny Rovan'i Manjakamiadana avokoa izy ireo, ka hanaovana tolobidy ny hazo ambiny, ka hojerena manokana amin’izany ireo mpanao asa tanana.
Efa nazahoana alalana tamin'ny Fitsarana ny fampiasana ireto hazo ireto, araka ny fanazavan’ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, Georget Alexandre.
Nisokatra ofisialy ny sabotsy 12 oktobra 2019 eto Antsiranana ny ASIEF, na ny fifaninana ara-panatanjahantena natokana ho an'ny mpiasam-panjakana.
Efa nanomboka tamin'ny 8 oktobra 2019 ny fifanintsanana, ary amin'ny 19 oktobra 2019 ny famaranana ny lalao rehetra.